पोखराको ड्यामसाइडस्थित फेवाताल किनारमा झण्डापार्कको निर्माण शुरु | JanaSammat.com
पोखराको ड्यामसाइडस्थित फेवाताल किनारमा झण्डापार्कको निर्माण शुरु
माछापुच्छे« प्रतिविम्व पार्क निर्माण
वैशाख १६, २०७६, सोमबार
पोखरा । पोखराको ड्यामसाइडस्थित फेवाताल किनारमा झण्डापार्कको निर्माण शुरु गरिएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाले संयुक्त लगानीमा फेवाताल किनारमा झण्डा पार्क बनाउन लागेको हो ।
दुवै सरकारको ५०/५० प्रतिशत लगानीमा पार्क बनाउन लागिएको हो । पार्क तयार गर्न ४ करोड लाग्ने अनुमान छ । ४ करोड लागतमध्ये चालू बर्षमा १ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । पार्कको पहिलो चरणको काम गर्न विनु कन्स्ट्रक्सनले ७६ लाख रुपैयाँमा जिम्मा लिएको छ ।
सात रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको पार्कमा जाने पुलसहित टिकट काउण्टर, ड्रिङकिङ वाटर एरिया, रेष्ट रुम, पानीको फोहरा, वाकिङ एरियासहितको फूट ट्रयाक, बाल उद्यान र पेभेलियन, भ्युइङ डेक र ओपन जिम लगायतका संरचना बन्ने महानगरका सिभिल ईञ्जीनियर सोभियत खड्काले जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्षमा एक करोड बराबरको पार्कको निर्माण हुने जनाइएको छ ।
महानगरका प्रशासकीय अधिकृत शेषनारायण पौडेलले पार्कभित्र ८० फिट अग्लो नेपालको राष्ट्रिय झण्डा राखिने छ । माछापुच्छ«े हिमालको छायाँसँगै नेपालको उक्त राष्ट्रिय झण्डा देखिनेछ ।
यस वर्ष १ करोड ९ लाखमध्ये असार मसान्तभित्र ७६ लाखको काम गरिने र्ईञ्जीनियर खड्काले जनाए । ७६ लाख रुपैयाँमध्येको निर्माण कार्य अन्तरगत पार्कको वरिपरि पर्खाल लगाउने, ढुङ्गा बिछाउने दुवो रोप्ने र ल्याण्ड स्केप मिलाउने कार्य हुनेछ ।
‘१ करोड ९ लाखको टेण्डर निकालेका हौं । ७६ लाखमा काम गर्न निर्माण कम्पनी राजी भयो,’ महानगरका प्रमुख इञ्जिनियर शोभियत खड्काले भने, ‘१७ रोपनी क्षेत्रफलमा आकर्षक पार्क बन्छ । यो बर्षको काम असार मसान्तभित्रै सक्नुपर्ने छ ।’
‘प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच सम्बन्ध राम्रो छैन भनेर होहल्ला आउँछ । तर, बास्तविकता त्यस्तो छैन,’ उनले भने, ‘दुवै सरकार सँगसँगै छौं भन्ने सन्देश दिन पनि यो काम महत्वपूर्ण छ । पूर्र्वाधारको कुुरा गर्दा हामीले पर्यटनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘पर्र्यटन विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार, पोखराका तालहरुको संंरक्षण र समृद्धि, पोखरा बजारलाई अझै सुन्दर थप्ने सवालमा गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिका एक साथ सँगै भएर जान्छ भन्ने सन्देश दिन पार्कको संंयुक्त निर्माण गर्न लागिएको हो ।’
फेवातालको संरक्षण साथसाथै जलाधारको क्षेत्रका सँगै काम गर्ने महानगरपालिकासँग सहकार्य रहने मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए । मुख्यमन्त्री गुरुङले तालको संरक्षण सम्बन्धमा ताल विकास प्राधीकरण बनाइसकेको उल्लेख गरे ।
‘गण्डकी प्रदेश पर्यटनबाटै समृद्धि चाहान्छ,’ उनले भने त्यसका लागि संरचना बनाउनुप¥यो । यो पार्क एउटा महत्वपूर्ण गन्तब्य हो । निर्माणमा कुनै समस्या हुँदैन ।
उनले तोकिएकै समयभित्र काम सक्न निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिए ।
झण्डा पार्क निर्माणको सोंच कसरी आयो ?
ड्यामसाइड युवा क्लबले आयोजना गरेको एउटा कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बनेर महानगरका मेयर मानबहादुर जिसी त्यहाँ जादा मेयर जिसीलाई माछापुच्छ«े हिमाल र नेपालको राष्ट्रिय झण्डाको छाँया अंकित मायाको चिनो प्रदान गरिएको थियो । फेवाताल, फेवातालमा माछापुच्छे« हिमाल र नेपालको राष्ट्रिय झण्डाको स्केच चाँही ईञ्जीनियर किसानसिंह गुरुङले गरेका थिए । जो, पोखरा–१७ का वडावासी हुन् । शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्र्यलय पोखराबाट सेवा निवृत्त छन् ।
मायाको चिनो हेरिसकेपछि मेयर मानबहादुर जिसीले नजिकै रहेका र्ईञ्जीनियर गुरुङलार्ई यस्तो पार्क बनाउँदा कति लाग्छ भनेर सोधे । उत्तरमा ई. गुरुङले २० लाग जति लाग्ने बताएपछि मेयर जिसीले भोली नै महानगरपालिका कार्यलय आउनुस । सम्झौता गरौं भने ।
सामान्य पार्क बनाउने सोंचबाट बृहत किसिमको पार्क बनाउने सोंच भयो । अलि, हेर्न लायक, देख्न लायक सबैको नजर पुग्ने आकर्षक पार्क बनाउने सोंचमा गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिका पुग्यो । गण्डकी प्रदेश सरकार पनि झण्डा पार्क निर्माणको सोंचमा थियो । अन्तत ः गण्डकी प्रदेश र पोखरा महानगरपालिकाको साझेदारीमा पार्क बनाउने सम्झौता भयो ।
आर्किटेक्चर सोफिया गुरुङले पार्कको डिजाइन गरेकी हुन् । आर्किटेक्चर सोफिया महिला भएकाले पनि महिलाको डिजाइनमा बन्न लागेकोले पार्क राम्रो, आकर्षक र बलियो हुनेमा महानगरका मेयर जिसी विश्वस्त छन् ।